I-ProofHQ: Ukuzenzekelayo Ukufakazela Ukusebenza Kwe-Intanethi | Martech Zone
I-ProofHQ: Ukuzenzekelayo Ukufakazela Ukusebenza kanye ne-Workflow Automation
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 17, i-2015 UMsombuluko, May 4, 2015 Douglas Karr
UbufakaziHQ iyisoftware esekwe ku-SaaS yokuhlola oku-inthanethi ehlehlisa ukubuyekezwa nokuvunywa kokuqukethwe nempahla yokudala ukuze amaphrojekthi wokumaketha aqedwe ngokushesha nangomzamo omncane. Ingena esikhundleni sezinqubo ze-imeyili nezokukopisha, inikeze amaqembu wokubuyekeza amathuluzi wokubuyekeza ngokubambisana okuqukethwe kokudala, kanye namathuluzi okuphatha amaphrojekthi wokulandela umkhondo wezibuyekezo eziqhubekayo. I-ProofHQ ingasetshenziswa kuyo yonke imidiya kufaka phakathi ukuphrinta, idijithali nomsindo / okubukwayo.
Imvamisa, izimpahla zokudala ziyabuyekezwa futhi zivunyelwe kusetshenziswa ama-imeyili, ubufakazi obukhuni, ukwabelana ngesikrini kanye nezinye izinqubo eziningi ezingasebenzi kahle. UbufakaziHQ ixazulula le nkinga ngokunikeza isisombululo esisekelwe efwini kumaqembu wokumaketha angagcini ngokubuyekeza, ahlele futhi ahlanganyele kumafa wokudala kepha futhi nokuba nabantu abafanele namaqembu avume impahla ngayinye ngaphambi kokudlulela esigabeni esilandelayo, okuyilokho okuhlukile kweProofHQ ukuhamba komsebenzi okuzenzakalelayo uyakwenza.
Ukuphathwa kokuhamba komsebenzi: Ukubuyekezwa okulungiselelwe futhi okuzenzakalelayo nokuhamba kokuhamba komsebenzi kwempahla yakho yokudala kubalulekile ekuqinisekiseni ukuthi amaphrojekthi wokumaketha nokunye okuthengiswayo kuqedwa ngesikhathi. Noma ngabe uyi-ejensi enokugeleza kokusebenza okuhlukile kweklayenti ngalinye noma umkhiqizo ohlangabezana nezinkinga zokuminyana kwangaphakathi nezokuhambisana, uzohlala uchitha isikhathi ngalokho okudingekayo ngaphandle kweyodwa. Ngokuhamba kokuhamba okuzenzakalelayo, abaqondisi bokudala, abaphathi bephrojekthi noma abezimakethe abaphethe ithimba bangafaka imisebenzi yokubuyekeza ephindaphindwayo nokugunyaza ku-autopilot, okukuvumela ukuthi ugxile ekwenzeni okwenzayo kangcono kakhulu: ukukhiqiza ngokwengeziwe nokudala ngokwengeziwe.
Izici ezisemqoka ze-ProofHQ
Inqubo elula yokubuyekeza nokwamukelwa
Amathuluzi wesikhathi sangempela, wokubeka amazwana enembile namakhaphu
Dala ubufakazi obuvela ezinhlotsheni zefayela eziyi-150 +
Ukuhlanganiswa namathuluzi we-Project Management kanye ne-DAM njenge-BaseCamp, i-Central Desktop, i-CtrlReviewHQ, i-Adobe Creative Suite, i-Microsoft Sharepoint, i-Xinet, i-Box, i-Widen ne-Workfront
Buyekeza ubufakazi ku-PC, i-MAC, i-smartphone noma ithebhulethi
Qhathanisa ngokuzenzakalela izinhlobo eziningi
Yabelana ngokushesha ngobufakazi namaqembu wokubuyekeza asatshalalisiwe
Landelela ubufakazi obuhambisana nesikhathi esinqunyiwe
Ukuhamba komsebenzi okuzenzakalelayo
Ukusingathwa kobufakazi obulula
Umzila wokuhlolwa kwesitembu wesikhathi
Tags: i-adobe suite yokudalaagencyamathuluzi we-ejensiizimvumeBasecampIbhokisiIdeskithophu EphakathingokubambisanaCtrlReviewHQdesignI-Microsoft Sharepointukufakazela inthanethiubufakaziubufakaziukufakazela ubufakaziithimbawandulaXinet
Ungayakha Kanjani Futhi Ulandelele Iphromoshini Yakho ye-Instagram noma Umkhankaso
Awutholi Ama-Gigs Okukhuluma Ngenxa Yobukhona Bakho Obuku-inthanethi
Jun 24, 2013 ku-7: 04 PM
I-ProofHQ iyisiqalo esihle, kepha kumakhasimende athuthukile, sicela ubheke i-Viki Solutions. Ngokusondeza okujulile okungama-2400%, ukunemba kombala, ukuqhathanisa okubuyekeziwe, ukupakisha izici ezithile, kanye nobuchwepheshe bokudlulisa amafayela okusheshayo, okuphephile nokwabelana komhlaba wonke, iViki Solutions yanelisa izidingo zezinhlangano ezinkulu zokuphathwa komkhiqizo emhlabeni jikelele. Singathanda ukuba yingxenye yendatshana yakho futhi! Ngiyazi ukuthi lokhu okuthunyelwe kwenkampani, kepha ngizama nje ukusiza abafundi bakho ukuthi bathole abakufunayo.
Jul 6, 2013 ku-5: 15 AM
Sisebenzisa iProofhub (www.proofhub.com) futhi sathola ithuluzi lokuhlola kanye nethempulethi zohlu lwephrojekthi kanye nohlu lwemisebenzi zingcono kune-basehampu ye-basecamp. Ithimba labaklami liphendula ngempela futhi lilalela amakhasimende abo, lokho bekuyinto enkulu kithi.
Jan 23, 2014 ku-8: 09 AM
I-ProofHQ iyindlela enhle kepha ngithanda iProofHub kakhulu ngoba inamandla amakhulu futhi ilula futhi inezici eziningi.